प्रकाशित मिति : २ फाल्गुन २०७७, आईतवार ०८:३६
प्रणय मौसम(लक्ष्मी राना)
काठमाडौं ।दुनियाँको हर बन्धन प्रेमले बनेको हुन्छ ।जसको न त समय हुन्छ न त दिन बस बिश्वास अनि त्याग र समर्पण । म सधै माया गर्नेहरूलाई भन्ने गर्छु अनि दिल खोलेर प्रेम गर्छु र भन्छु “सुन प्यारो मान्छे ! तिमी प्रस्ताव होइन बिश्वास लिएर आउ, तिम्रो नाममा यो जिन्दगी त के पुरै जुनि सुम्पिदिन्छु…” अलि कति प्रेम भाव मैले पनि पक्कै दर्शाए बुझ्नेले बुझे नबुझ्नेले खै के सोचे? फाल्गुनको महिना नलाग्दै नेपाली हिन्दु समाजको महान चार्ड दशैमा झैं घटस्थापनाको दिनबाट सुरु भएर पुरै १० दिनमा प्रणय दिवस मनाइन्छ । परम्परा कि देखासेखी यो चाहिँ आज सम्म बुझ्न सक्या छैन मैले । चकलेटका पोका अझ भनम टेडिबियरका पसलहरु खचाखच देखिन्छ रहर या बाध्याता गोजिमा पैसा नभई नभई पनि आफ्नो मान्छेलाई उपहार किनिदिनै पर्ने अझ भनम झुट्टा आश्वासन त पक्कै टन्नै हुन्छन् होला !
म जान्दिन प्रणय दिवसलाइ खास मान्नेहरुको प्रेम सफल छन् कि छैनन् ? कतै मायामा हिसाब किताब त भाको छैन?
भ्यालेनटाइन कुनै पर्वको नाम होइन रोमका एक पुजारिको नाम थियो जसले भबिस्यमा हुने कुनै पनि विवाहका लागि प्रतिबन्धको शक्तिशाली शासन चलाइदिएका थिए र पनि भ्यालेनटाइन पुजारिले गुपचुपले एक जोडिको बिहे गराइदिए जसको सजाय भ्यालेनटाइनलाई थुनामा राखी फाँसीको सजाय तोकि दिए उत्त समयमा भ्यालेनटाइनलाइ भेट गर्न आउनेहरुले गुलाफको फुल र उपहारहरु लिएर आउथे र प्रेमको जितको कामना गर्दथे तर भ्यालेनटाइनलाइ १४ फेब्रुअरी २६९ मा फाँसी दिए र प्रेम गर्नेहरुको लागि उनले हासी हासी सुलिमा चढे तत्पश्चात १४ फेब्रुअरीलाई प्रणय दिवसको रुपमा मनाउन थालियो ।
हर सम्बन्धको प्रेम शत्तिशाली हुन्छ तर हर प्रेम १४ फेब्रुअरी जस्तो नहोला किन कि बिश्वास प्रेममा हुनु पर्छ ताकी देखासेखी नरहुन दिलैले दिउन लेनादेनाको कुनै हिसाबकिताब नहोस् ! जब एक जोडि बिनाकुनै शर्त एकअर्कालाई एकोहोरो माया भरोसा दिइमात्र राख्छन् नि तब लाग्छ अरे वा क्या प्रेम छ ! मायामा कुनै डेबिड र क्रेडिट नहुन् दिल खोलेर आफ्नो ठान्न सकुन् जिबनले भ्याए जति प्रेम रहोस् ।
१४ फेब्रुअरी मलाई खै किन खास लाग्दैन सायद आजभोली माया भन्दा बडि ब्यालेन्स सिट सङ्ग तुलना भएको देखेर हो कि ! जहाँ धेरै पैसा हुन्छ त्यहाँ धेरै कस्मेटिक प्रेम हुन्छ जहाँ थोरै पैसा हुन्छ त्यहाँ इत्ति पनि माया हुन्न । माया गर्ने मनहरु यसै छन् दिल लगाएर प्रेम गर्नेहरु दिल टुटाएर बाचेका छन् यस्तो लाग्छ १४ फेब्रुअरी होइन हरदिन उनिहरुलाई १४ फेब्रुअरी छन् माया गर्ने मन कहाँ १४ फेब्रुअरी कुरि बस्छन् र ! हिसाबकिताब बिनाको प्रेम जब तिमी मुस्कुराउँदै आफ्नो मान्छेको समीप बस्छौं तब आभास होस् उसको सारा संसार उज्यालो बिना कुनै शर्त ! बिना कुनै पश्चताप ।प्रणय दिवस प्रणयमय बनोस् ! हरेक माया गर्ने जोडिको प्रेम दिवस होइन हर दिन हरेक पल प्रेम दिवस बनोस् न बार होस् न दिन होस् न त समय होस् । पश्चताप नगर तिमी म तिम्रो मायालाई हरेक पल हरेक दिन हरेक समय उल्लास पुर्ण बनाइदिनेछु । शुभकामना माया गर्ने मनहरुलाई !